တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: June 2007
Theroy is Theory. FOR ALL who don't know the WATERFALL MODEL (Software Engineering)
Posted by Philip Shield at 3:09 PM No comments:
Information, Knowledge, Learning, Intuition စတာတွေ အကုန်လုံးနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အကျယ်အ၀န်းဆုံး စကားက Wisdom...Wisdom ကို "ပညာ" လို့ ဆရာ ခေါ်ရတာက ပါဠိစကား "ပညာ" ကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆရာ တွေက Wisdom လို့ပြန်ကြတာရှိလို့ပဲ။ သူကတော့ သာမန်သိမှုလေး မဟုတ်ဘူး။ သာမန်သိမှု အစုအပုံလေး မဟုတ်ဘူး။ သူက ကျယ်ပြန့်တဲ့ သိနားလည်မှုအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး အဆင့်မြင့်တဲ့ ဆုံးဖြတ်စွမ်းမှု နားလည်မှုကို ခေါ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ ပညာရဲ့ အသုံးလေးပါလာတယ်။ အနက် အဓိပ္ပါယ်လေး။ တတ်သိ နားလည်ရုံတင် မကတော့ဘူး။ တတ်သိနားလည်မှု အပေါ်မှာ အခြေခံပြီး လူသည် ဆုံးဖြတ်စွမ်းမှု ရှိလာတယ်။ ပြီးတော့ ရေရေလည်လည် ပယ်ပယ်နယ်နယ် ထောင့်စေ့စေ့ နားလည်လာတယ်။ ဒါမျိုးမှ Wisdom လို့ခေါ်တယ်။ အင်္ဂလိပ်လိုတော့ Wisdom ကို အနက်ပြန်တဲ့ အခါမှာ (Wisdom implies superior judgement and understanding based on broad knowledge) တဲ့။ Wisdom သည် သာမန် သိရုံမဟုတ်၊ လူတွေလုပ်ကိုင်ပြောဆို တွေးတောကြံဆတဲ့ နေရာတွေမှာ ရှေ့ဆောင်ရှေ့ရွက်ပြုနိုင်တဲ့ သဘောမျိုး၊ ထိန်းသိမ်း နိုင်တဲ့ သဘောမျိုး။
တက္ကသိုလ်ဘုန်းနိုင် ၏ "ပညာရဲ့သဘော" မှ
Posted by Philip Shield at 3:33 PM 1 comment:
ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ်က ကိုဝဏ္ဏကို(SAME) က မြန်မာ့ရိုးရာပြက္ခဒိန် ဆောဖ့်ဝဲ တစ်ခုကို ထုတ်လုပ်လိုက်ပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ဆီပို့ပေးတယ်။ ကျွန်တော်က အခြားသူတွေကို ပေးလို့ရမလားဆိုတော့ ရပါတယ်တဲ့။ Share လုပ်လိုက်ပါ ဆိုတာနဲ့ ဒီ Blog ပေါ်မှာပဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ကိုယ့် မွေးနေ့ကို မြန်မာလိုမသိပါဘူး။ မေ့နေပါတယ်။ ဒီဆောဖ်ဝဲလေး ရတော့မှ နှစ်ရွှေ့ပြီး ပြန်ကြည့်တော့ ကိုယ့်မွေးနေ့ကို မြန်မာလို ပြန်သိရတော့တယ်။ ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ်ကနေ ၂၀၁၉ ခုနှစ် အထိ နှစ် ၁၀၀ ကျော်ပါတော့ ကြိုက်တဲ့နှစ် ကြည့်လို့ရတယ်လေ။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကျော်လဲ နှစ်တိုး Update တွေကိုလဲ လုပ်လုပ်သွားမယ်တဲ့။ ကျွန်တော်ကတော့ သူ့ကို Myanmar Calendar RSS လေးရေးဖို့တောင်းဆိုထားတယ်။ blogger တွေ အလွယ် သုံးရအောင်လို့လေ။ Installer file ကို ဒီနေရာ မှာ Download လုပ်ပါ။
Download Link: http://www.freewebtown.com/kophyo/Software/MyanmarCalendarSetup.zip
Posted by Philip Shield at 11:23 AM2comments:
မိတ်ဆွေ... သင့် Mobile Phone ပေါ်မှာ SMS ရိုက်ရတာ လက်ညောင်းလှပါတယ် ဆိုရင် Microsoft SMS Sender လေး Download လုပ်ပြီး သုံးကြည့်ပါလား။ ဖုံးကို Computer နဲ့ချိတ်ပြီး Computer ကနေ SMS ပို့ လို့ရတယ်။ မိတ်ဆွေရဲ့ Mobile phone ကိုတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ Serial cable (သို့) Infrared (သို့) Bluetooth တနည်းနည်း ဖြင့်ချိတ်ဆက်ထားရပါမယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် Windows mode နဲ့ သုံးပါတယ်။ ပုံကို ကြည့်ပါ။
အဲဒါလေးကို ကိုယ့်Program ထဲကနေ ပြန်ခေါ်သုံးချင်ရင်တော့ Command Line Mode နဲ့ သုံးလို့လဲရတယ်။ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ Command Line Mode လေးလဲ ပါတော့ VB လို ဟာမျိုးကနေ Shell နဲ့ခေါ်ပြီး မိတ်ဆွေရဲ့ Program ထဲမှာလည်း ထည့်သွင်းမြုပ်နှံ ရေးသားလို့ရပါတယ်။ ဖုံးတွေ အများကြီးကို Loop လေးပါတ်ပြီး SMS ပို့လို့လဲရတာပေါ့။ Command Line က ဒီလိုformat ပါ ( smssender.exe /p:[phone] /m:"[message]" )။ နမူနာကို အောက်မှာကြည့်ပါ။
eg. smssender.exe /p:99999999 /m:"Hello "
မှတ်ချက်။ Command Line နဲ့မသုံးခင် Start}Program Files}Microsoft SMS Sender}Microsoft SMS Sender} Click "Option" } Check "Enable Logging" အရင်လုပ်ပါ။ အဲဒါလုပ်ပြီးရင် အဲဒီကနေ တစ်ခါပို့လိုက်ပါ။အဲဒါ ပြီးမှ Command Line သုံးပြီး ပို့ရင် ကောင်းကောင်း အလုပ်လုပ်မယ်။ နို့မို့ ဆိုHistory မရှိဘူးဆိုပြီး Command Line မှာ Error Message ပေါ်နေတတ်ပါတယ်။
Download Link: http://www.soft32.com/Download/Free/Microsoft_SMS_Sender/4-9694-1.html
Microsoft ရဲ့ Official Website ကနေ Download လုပ်ရင်လဲရတယ်။ ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေရဲ့ OS က Genuine Version ဟုတ်မဟုတ် တော့စစ်တယ်။
Official website: http://www.microsoft.com/globaldev/outreach/dnloads/smsSender.mspx
Posted by Philip Shield at 11:18 PM 1 comment:
Labels: Programming, Useful Resources
ဒီစာတိုလေး ကို တွေ့ရ ဖတ်ရတော့ မိတ်ဆွေတို့ကိုလည်း မျှဝေချင် တဲ့ စေတနာ ဖြစ်လာတယ်။
Wheneveraserious matter arises, take the deeds of merit you have done, the positive deeds you have performed, the contributions you have made. Call upon the truth, say the prayer for what you wish and what you wish will come true...
အရှင်ဆန္ဒာဓိက၏ စိတ်အားဖြည့်ဓမ္မသံစဉ်မှ (Ref: http://www.planet.com.mm/forums)
ကျွန်တော့် ဇာတိမြို့မှ ငယ်ဆရာတော်ကြီး ကလည်း သစ္စာ၏ သဘောကို "မေတ္တာက အေးချမ်းတယ်၊ သစ္စာကဆေးစွမ်းတယ်" ဟု အမြဲလိုလို ဆုံးမပါသည်။ ကျွန်တော် ဒုက္ခဖြစ်တိုင်း ဖြစ်တိုင်း သစ္စာတိုင်တည် ၍သာ ခံနိုင်ရည်ရှိခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲတို့မှ လွန်မြောက် ခဲ့ပါသည်။
Posted by Philip Shield at 1:08 PM2comments:
Last5seconds before time's up!
Posted by Philip Shield at 4:02 PM No comments:
I really like Daily Motion. Not only because they like 18 Doughty Street, but because their site has high quality video both in terms of content and technology. They’re not as big as YouTube I don’t think, but if Google carries on screwing up YouTube they might just be inabetter position inafew months. Anyhows, here’savid about them. I would have postedavideo about YouTube of the same ilk in the interests of fairness, but I couldn’t find one! (Posted by Mike Rouse)
Uploaded by Dailymotion
Posted by Philip Shield at 11:20 AM No comments:
Posted by Philip Shield at 7:10 PM 1 comment:
Posted by Philip Shield at 12:04 AM No comments:
ဖတ်ပါ့ ဆိုတဲ့ online မဂ္ဂဇင်း ဖတ်ဖူးကြပါသလား။ ဖတ်ကြည့်ပါ။ သတင်းတွေက တော်တော် မြန်မြန်နဲ့ များများ update ဖြစ်ပါတယ်။ Link : http://www.phatpa.com
Posted by Philip Shield at 5:58 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 5:43 PM4comments:
Cost of Living survey (Worldwide Ranking 2007, including housing)
စင်္ကာပူက လူနေမှုစရိတ်ကြီးပါတယ်။ ပုံကို ကြည့်ပါ။ နယူးယောက်က စင်္ကာပူထက် နေထိုင်စားရိတ် ပို ဈေးချိုပါတယ်။ စင်္ကာပူက အခုနှစ် တိုင်းထွာချက်များအရ ကမ္ဘာပေါ်မှာ နံပါတ် ၁၄ ချိတ်ပါတယ်။ အရင်နှစ်က နံပါတ် ၁၇ ပါ။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တောင် ဂုဏ်ယူရမလိုလို ဖြစ်မိပါတယ်။ ဒီလိုဈေးကြီးတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်လို့။ မှန်ပါတယ်။ ဒီနှစ် အိမ်ခန်းခတွေ သိသိသာသာ တက်တယ်။
Posted by Philip Shield at 9:47 AM No comments:
အဖေဟာ အကောင်းဆုံးကို ဖြစ်စေချင်တယ်။
အကျပ်တည်းဆုံး ကာလတွေမှာ မညိုမညင်ဖေးမပေးတယ်။
မောပန်းတဲ့အခါ ချွေးသိပ်ရာ ညောင်ပင်ရိပ်သဖွယ် ဖြစ်တယ်။
အေးမြတဲ့ ရေအိုးစင် သဖွယ်ဖြစ်တယ်။
ဆိုက်ကပ်ရာ ကူးတို့ဆိပ်သဖွယ် ဖြစ်တယ်။
"လောကဓံ ကို ခံနိုင်ဖို့" တဖြည်းဖြည်းချင်း ပုံသွင်းပေးခဲ့တယ်။
"ဓမ္မ" နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့တယ်။
ဓမ္မမိတ်ဆွေ လည်း ဖြစ်တယ်။
အမှားနည်းအောင် "သတိ" နဲ့ နေထိုင်တတ် ဖို့ ပြောတယ်။
မြင်တွေ့သူ ကို မေတ္တာပွား ဖို့ ပြောတယ်။
အသက်ကြီးကြီးလာမှ အဖေ့မေတ္တာကို ပိုပိုသိလာတယ်။
Posted by Philip Shield at 11:45 AM 1 comment:
လှေတက်က ငယ်၊ သယ်နိုင်ဖို့ အရေး။
Posted by Philip Shield at 12:20 AM No comments:
အချိန်ကား မြန်လှသည်။ နေ့ကိုလစား၊ လကိုနှစ်စား ဖြင့် ပြက္ခဒိန်စာရွက်များ တရွက်စီကုန်လွန်ခဲ့လေပြီ။ ကျွန်ုပ်လည်း အီကွေတာရပ်ဝန်း ရှိ ဤကျွန်းငယ်လေးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်မှာ နှစ်အနည်းငယ် လွန်ခဲ့လေပြီ။ အချို့ရက်တွေမှာ နေပူသည်။ အချို့ရက်တွေမှာ မိုးရွာသည်။ လေက အမြဲ စိုစွတ်သည်။ ရံခါ ဤကျွန်းမှ အနောက်မြောက်စူးစူး ဘက်လောက်မှာ ရှိနေသည့် မိဘ ဆွေမျိုး တို့ကို သတိရမိလေသည်။ ယခုရောက်နေသော နေရာသည် သူတို့ နှင့် လောင်ဂျီတွတ်မျဉ်း ခုနှစ်ခု အကွာလောက်မှာ ရောက်နေမည်ဟု မှန်းဆရသည်။
အင်း.... ဘာလိုလိုနှင့် ဤကျွန်းတွင် လာမည့်ဇူလိုင်လမှ စ၍ GST ခေါ် ရောင်းခွန် များ 5% မှ 7% သို့ တိုးကောက် ပေတော့မည်...
Posted by Philip Shield at 4:31 PM2comments:
မိတ်ဆွေတို့ Hacker Puzzle ဖြေဘူးပါသလား။ သင့်စဉ်းစားဥာဏ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာ ဒီ Web Page မှာမှတ်ကျောက်တင် ကြည့်ကြပါ။ ကျွန်တော်တော့ အခု ဖြေတာ နာရီဝက်လောက်ရှိပြီ။ အဆင့် ၁၉ ရောက်သွားပြီဗျ။ တော်တော်ဦးနှောက်စားပါတယ်။ ဖြတ်ထိုးဥာဏ်သုံးဖို့၊ Google ရှာတာကောင်းဖို့ အင်မတန်လိုတယ်။
Page 1 ကစမယ်။ Hint လေးတွေဖတ်ကြည့်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ Step မြင့်လာရင် Hint မပါတော့ဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာစဉ်စားရမှာနော့်။
Posted by Philip Shield at 12:51 AM 1 comment:
Safari3Public Beta. The world's best browser. Now on Windows, too.
Posted by Philip Shield at 10:21 AM No comments:
အခုတလော လူတွေ GTalk ကိုတော်တော်အသုံးများလာကြ၏။ သတိပြုမိတာတစ်ခုရှိ၏။ GTalk မှာ ကိုယ်စီ ပုံလေးတွေတင်ကြ၏။ Custom message လေးတွေ ကိုယ်စီ ရေးကြ၏။ အဲဒါလေးတွေ ဖတ်ဖတ်ပြီး တစ်ခါတစ်ခါ ပြုံးရ၏။ ဖီလင်သမားတွေလဲပါ၏၊ အချစ်သမားလည်းပါ၏။ အလွမ်းလဲပါ၏။ အသောလဲပါ၏။ ငိုချင်းချတာလည်း ပါ၏။ နိဗ္ဗာန်ဆော်လည်းပါ၏။ ကိုယ့်ဘလော့ကိုယ် ကြော်ငြာတဲ့လူလည်းရှိ၏။ ဟိုရေး ဒီရေး ရေးရေးပြီးတင်ကြလေကုန်၏။ မှတ်မှတ်ရရ များကို ပြောရလျှင်
"ငါးမြင်း ဆီပြန်ဟင်းလေးနဲ့ .. ငါပိရည် တို့စရာအစုံ လေး စားချင်လိုက်တာ..." (သူ့ဟာ ဖတ်တာ ကိုယ်ပါ သွားရေ ကျလာတယ်)
"လုပ်ကြပါအုံးရှင်... မန်နေဂျာကို programming သင်ပေးရမယ်တဲ့... " (သနားစရာပဲ)
"Mar Tar Pi Tu Gu Naw.. Ah Nan Daw" (Burglish ဖြင့် မာတာပိတုဂုဏောအနန္တာ ကိုရေးထားသည်။)
"Yaw Ni Thaw Ma Na Thi Ka Ya" (ယောနိသောမနသိကာရ ဆိုပဲ၊ ဘာကို အသင့်အတင့် နှလုံးသွင်းမယ်တော့မသိဘူးဗျ။ )
"No Limit? Jonathan!" (လက်စသတ်တော့ အဓိပ္ပါယ် က No limit တဲ့လား ယောနသံဇင်ယော်ရယ်တဲ့ဗျ။ သံသယဖြစ်တဲ့ သဘောပေါ့။)
"လောကကြီးကို စိတ်ကုန်တယ်ဗျို့" (ကြည့်ရတာ တောထွက်မဲ့ပုံတော့ ဟုတ်ပုံမရဘူးဗျ။)
ပုံတွင် "ကောင်မလေး။ ။ Q တယ်ဆို... ကောင်လေး။ ။ကွဲပြီ"
"လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသော GTalk ID သည် အသဲကွဲ(ပုံဖြင့်) နေပါသဖြင့် ခေါ်ဆို၍မရနိုင်ပါရှင်။" (အဟုတ်သား လားဗျ)
"တစ်ချက်လေး စောင်းငဲ့ကြည့်ပါအုံး" (ကလေးပုံလေးနဲ့ဆိုတော့ မဆိုးဘူး၊ ကလေးကိုပြပြပြီး ဒီလိုလုပ်နေကြ...)
"အမြဲမဟုတ်တောင် တစ်ခါတလေတော့ လွမ်းမိတယ်" (တမျိုးတော့ တမျိုးပဲ)
"မင်းမရှိတော့လည်း ဒီလိုပဲနေတော့မယ် နော့ " (ပုံကဖိုးသူတော်ပုံ)
"Chatting with Husband" (ကမ္ဘာသိအောင် .. လုပ်ပုံရတယ်။ )
"ပြန်ဆုံဆည်းရန် မဝေးသောကာလ" (ဘာကိုဆိုလိုပါလိမ့်???)
"စားချင်တယ်... စားချင်တယ်" (ဗုဒ္ဓေါ...)
"သစ္စာဖောက်ကို အလိုမရှိ" (မိန်းကလေး အသဲကွဲနေပုံရတယ်)
"I am raising fund for meditation center. Pls contact me if you want to donate." (သာဓု သာဓု သာဓု)
Posted by Philip Shield at 11:55 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 1:22 AM No comments:
Posted by Philip Shield at 9:49 AM No comments:
He said he hopes the book will help “double or triple the number of Myanmar-language bloggers in the coming one or two years”. Read More...
Posted by Philip Shield at 9:46 AM No comments:
Boneless CHICKEN စားကြပါအုံးလားဗျ။
Posted by Philip Shield at 1:06 PM No comments:
လူနာရီကို မြင်ဖူးကြလား။ ဒီနေရာမှာကြည့် ။ ဖန်တီးထားတဲ့ သူက တော်တော် creativity ဖြစ်တယ်။
Posted by Philip Shield at 10:45 PM No comments:
တခါက ချင်းတောင်က ချင်းအမျိုးသားတဦးဟာ မြစ်ဝကျွန်းပေါ်ဒေသ ကို ပထမဆုံးအနေနဲ့ အလည်အပတ်ရောက်လာ သတဲ့။ ချင်းတောင်မှာ အုန်းပင်မရှိလို့ အုန်းသီးတခါမှ မစားဘူးတဲ့ ချင်းအမျိုးသားက အုန်းသီးကို စားကြည့်ပြီး မှတ်ချက်ချလိုက်ပုံက "အောက်ပြည်အောက်ရွာက အုန်းသီး ကောင်းတယ်ဆိုလို့ စားကြည့်ပါတယ်။ အရသာက ဖန်တွတ်တွတ်နဲ့၊ အစေ့ကလည်း အကြီးကြီး။"
တခါကရွာတစ်ရွာမှာ မောင်လှဆိုတဲ့လူရွယ်တစ်ဦးရှိသတဲ့။ မောင်လှအရွယ်ရောက်လာတော့ မိဘများက အိမ်ထောင်ချပေးချင်ပေမယ့် မောင်လှမှာ အောက်နှုတ်ခမ်းပြတ်နေလို့ ယူမယ့်လူမရှိဘူးတဲ့။ တနေ့တော့ မိတ်ဆွေဟောင်းတစ်ဦး ဆီကတဆင့် တခြားရွာတစ်ရွာက သမီးပျို ကို မိဘချင်းစကား ကမ်းလှမ်းကြသတဲ့။ မောင်လှမိဘများက သူတို့သား အောက်နှုတ်ခမ်း မရှိတာကို ဖုံးကွယ်ထားချင်တော့ မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကို ညဘက်မှာပဲ မီးမှောင်ချပြီး ကျင်းပရမယ်လို့ အဆိုပြုတယ်။ သတို့သမီးရှင်ဘက်ကလည်း ကန့်ကွက်ခြင်းမရှိတော့ မောင်လှရဲ့ မင်္ဂလာပွဲကို နေ့ကောင်းရက်သာရွေးပြီး တညမှာ မီးမှောင်ချပြီး ကျင်းပကြသတဲ့။
မင်္ဂလာဦး ထမင်းစားဝိုင်းမှာ မောင်လှက ဟင်းချိုပူကြောင်းကို...
လို့ပြောတော့ သတို့သမီးက ပြန်ပြောလိုက်ပုံက
"၀ူရင် ၀ုတ်တောက်ပေါ့" တဲ့။
အငြိမ့်ထဲမှာ မင်းသမီးက "အလို... ဘုရားရေ ဟို့ရှေ့က သစ်ပင်ပေါ်မှာ မဲမဲ မဲမဲ... လှုပ်လှုပ်လှုပ်လှုပ်နဲ့" "လက်စသတ်တော့... အသင်ရုက္ခစိုး ပါလား..."
အဲဒီအခါမှာ ရုက္ခစိုး လုပ်တဲ့လူပြက်က
"အေး ... ငါနည်းနည်းပေါ်သွားတယ်..."
တစ်ခါက ပြည့်တန်ဆာမ တဦးဟာ ပြည့်တန်ဆာမှုနဲ့ တရားရုံးရောက်လာပါရော။ တရားခွင်မှာ တရားသူကြီးက... "ဟဲ့... တရားခံမ နင့်နာမည် ဘယ်လိုခေါ်သလဲ..." လို့ မေးတဲ့အခါမှာ ပြည့်တန်ဆာမက ပြန်ဖြေလိုက်ပုံက "သိသားနဲ့..." တဲ့။
ပွဲခင်းထဲမှာ လူပြက်တစ်ယောက်က "ဒို့မင်းသမီးလေးဟာ အနုပညာကို ဘယ်လောက်တန်ဘိုးထား သလဲဆိုရင် ရင်နှစ်ခြမ်း ဗြန်းဗြန်းကွဲသွားတဲ့ အထိ ပရိသတ်ကို ဖျော်ဖြေသွားမှာပဲ..."။ ဒုတိယလူပြက်က "သူငယ်ချင်း မင်းသမီးလေး ရင်နှစ်ခြမ်း ဗြန်းဗြန်းကွဲသွားရင် ငါ့ကို တခြမ်းပေးပါကွာ..." တဲ့။ ဒီတော့ ပထမလူပြက်က "မင်းကဘာလုပ်မလို့တုံး..."။ ဒုတိယလူပျက်ဖြေလိုက်ပုံက "ငါ့အိမ်မှာ ရေနွေးကရားဖုံး လုပ်မလို့ပါကွာတဲ့..."။
Posted by Philip Shield at 6:21 PM No comments:
Posted by Philip Shield at 1:01 PM 1 comment:
Microsoft ကတော့ လုပ်ပြန်ပြီ။ surface computer တဲ့။ surface computer ဆိုသည်မှာ အောက်ပါ ပုံတွင်မြင်ရသည့်အတိုင်း ၃၀ လက်မ စားပွဲပုံစံ ဖန်သားပြင် ပါရှိသည်။ အဲဒီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ လိုရာသာ လုပ်ပေတော့။ ကျွန်တော့်အမြင်တော့ ကွန်ပျူတာ သုံးရတာ ပိုသဘာဝကျလာ သည်ဟု ထင်ပါသည်။ ဒီလိုနဲ့ နောက်ဆို တဖြည်းဖြည်း keyboard နှင့် mouse ကိုမေ့သွားကြတော့ပေမည်။
Link to Website: http://www.microsoft.com/surface/
Posted by Philip Shield at 10:15 PM No comments: